I-diode laser hair ukususwa factory - China Diode laser hair ukususwa Abenzi, abahlinzeki
Ngesikhathi senqubo, i-laser ingena esikhunjeni futhi imuncwe i-melanin ku-follicle yezinwele, okuholela ekwandeni kwezinga lokushisa lesikhumba sezinwele kanye nokuyeka ukwakheka kwe-melanin, okugcina kuholele ekususweni kokugcina kwezinwele.
3 Wavelength diode laser hair ukususa 800w 755 808 1064 laser
Ama-wavelengths amathathu (755nm / 808nm / 1064nm) umshini we-diode laser usebenzisa ama-wavelengths ama-3 asebenza kahle kakhulu ekususweni izinwele, ngalinye likhomba izakhiwo ezahlukahlukene ngaphakathi kwesikhumba sezinwele; izinhloso ezi-3 eziyinhloko zokwakheka komzimba zifaka i-bulge, i-bulb ne-papilla. Ipulatifomu yokususa izinwele yokuqhekeka ehlanganisa ukusebenza kokugcina nenduduzo engenakuqhathaniswa. Ngenxa yobukhulu bayo bendawo nohlelo olupholile lokupholisa, ukwelashwa manje sekushesha kakhulu futhi akunazinhlungu - kunikeza isisombululo esibalulekile esithuthukisiwe seziguli nabasebenza ngokufanayo.
Umshini wokususa izinwele ophathekayo we-1000W 808nm
Umshini wokususa izinwele we-808nm ukhiqizwa ngokususelwa enkambisweni yokuthuthuka kwemakethe yokususwa kwezinwele, isebenzisa ubungqingili be-laser eyingqayizivele engu-808nm, ingene esikhunjeni kuzinwele zezinwele, ngokusho komgomo wokumunca okhethiwe, amandla we-laser amunca i-pigment emnyama, bese enza izinwele ikhono lokuvuselelwa kokulahleka, ngesikhathi sokwelashwa, uhlelo oluyingqayizivele lokupholisa isafire lungavikela ngempumelelo i-epidermis ayishiswa, ukufezekisa ukususwa kwezinwele okungenabuhlungu, okusheshayo, nokunomphela.
I-Germany ingenise uhlelo lokupholisa ishaneli i-laser micro channel